विचार / ब्लग – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
नेपाल भारत सीमा बिबाद; समाधानका उपाय के ?
अर्थ राजनीति ~ नेपाल–भारत सम्बन्धमा कालापानी क्षेत्रको विवाद यस्तो गाँठो हो, जसलाई नफुकाई भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सौहार्द बन्न सक्दैन । यो सीमा विवाद त्यतिवेला मात्र साम्य हुन्छ, जतिवेला दुवै देशका सरकार उपलब्ध तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर खुला छलफलका लागि वार्तामा बस्न राजी हुन्छन् । यस्तो छलफलका लागि नेपालले पहलकदमी लिनुपर्ने उपयुक्त वेला आएको छ […]
कोरोना भाइरसका कारण देश अस्त/ब्यस्त, सरकार भने आफ्नै धुनमा मस्त !
अर्थ राजनीति – कोरोना भाइरसका कारण आमजनता बिगत ३३ दिन देखि घरभित्रै थुनिएर बसेका छन् । जनता संक्रमणको त्रासले हात, खुट्टा चलाउन नपाएर हातमुख जोर्ननै पिरलो भएपछि मजदुर, श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिक जोखिमयुक्त यात्रामा छन् । कोरोनाले ल्याएको संकटका कारण स्वास्थ्य र आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका जनतालाई कसरी राहत र सेवा दिनेभन्ने विषयमा ध्यान […]
अर्थ राजनीति । बिश्वब्यापीरुपममा फैलिएको कोरोना भाईरस ( Covid-19 ) माहामारीको रुपमा मानव शभ्यताकोलागी ठुलोचुनौतीको रुपमा फैलीरहेको छ । यस रोगले बिश्वभरीनै जनताहरुलाई भयाभह र त्रासपुर्ण बनाएको छ । आजको दिनमा घरभित्र रहेर भाइरसबाट केहि हद सम्म सुरक्षित महसुस गरे पनि प्राय सबै जनताको मन अशान्त छ । लकडाउनको पूर्वजानकारी नभएकाले ग्यास, चामललगायतका खाद्यान्न र […]
अर्थ राजनीति । “The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting” यानिकी “युद्धको सर्वोच्च कला भनेको लडाई नगरी दुश्मनलाई काबूमा लिनु हो” यो भनाई एक चिनियाँ जनरल, सैन्य रणनीतिकार, लेखक तथा दार्शनिक सुन्ज़ी (Sun Tzu) को हो, उनी ५औं शताब्दी ईसापूर्वमा पुरातन चीनको पूर्वी झोउ अवधिमा बस्थे । सुन्ज़ी ‘आर्ट अफ […]
नेपाली बैंकिंग क्षेत्रमा अबको गभर्नर कस्तो हुपर्छ : पुर्व गभर्नर गणेश बाहादुर थापा
अर्थ राजनीति । नेपाल रास्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर गणेश बाहादुर थापा आफुले नेपाल रास्ट्र बैंकमा ३५ वर्ष भन्दा लामो समय सेवा गरेको अनुभव साट्नु भएको छ । उहाले गभर्नरले गर्नु पर्ने काम र दायित्व को बारेमा पनि बताउनु भएको छ भने अब आउने गभर्नर कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको छ । […]
अर्थ राजनीति । बैंकर्स संघका अधक्ष्य भुवन दाहालले यदि कुनै बैंकका कर्मचारी श्रम श्वोसीत भएका छन् भने बैंकर्स संघले त्यस्तो समस्याको सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । साथै अजय श्रेष्ठ जस्ता सोझा कर्मचारी थुनामा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र यस्तो समस्या पुन नदोहोरियोस भन्नका खातिर बैंकिंग कसुर सम्बन्धि ऐन पारीमार्जंन गर्न जरुरि रहेको र त्यसका निमित्त आफुले […]
नेपाली बैंकिंग क्षेत्रमा साइबर क्राईम खतरनाक हुनसक्छ : पुर्व गभर्नर गणेश बाहादुर थापा
अर्थ राजनीति । नेपाल रास्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर गणेश बाहादुर थापा आफुले नेपाल रास्ट्र बैंकमा ३५ वर्ष भन्दा लामो समय सेवा गरेको अनुभव साट्नु भएको छ । उहाले गरिबी निवारण संघ संस्थासंग आवद्द भई बंगलादेश, पाकिस्तान, इण्डोनेसिय, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा काम गरेको कुरा पनि बताउनु भयो । साथै उहाले पहिले आफुले काम गर्दा खेरिको रास्ट्र […]
मेगा बैंककी प्रमुख: अनुपमा खुन्जेली संगको अन्तवार्ता साथमा मेगा बैंकबारे परिचयात्मक वृत्तचित्र (भिडियो)
अर्थ राजनीति । मेगा बैंककी सिइयो अनुपमा खुन्जेलीले बैंकको वित्तीय अवस्था र संरचनागत अवस्थाको बारेमा प्रस्ट परेकी छिन् । ऊनले बैंकबाट महिलालाई सस्तो व्याज दरमा १५ लाख सम्म दिइरहेको र आफुपनि पनि महिला भएकोले यसलाई बिशेस महत्तो दिएको समेत जानकारी गराईन । ऊनले गण्डकी बिकाश बैंक संग मर्जरको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसका अलावा […]
अर्थ राजनीति । नेपाल रास्ट्र बैंकका सञ्चालक सिए. डा. सुबोध कुमार कर्णले नेपाल रास्ट्र बैंकमा सञ्चालकको काम, कर्तब्य र दयित्योको बारेमा प्रस्ट पारेका छन । उनले नेपाल रास्ट्र बैंकको कमीकमजोरी र समस्याको बारेमा पनि बताएका छन । साथै मर्जर सफल पार्न बैंकका सी इ ओ हरुलाइ मात्र भनेर नहुने बताए, मर्जर सफल हुनका निमित्त लगानिकर्ता […]
नेपाल रास्ट्र बैंकका सञ्चालक सिए. डा. सुबोध कुमार कर्णसंगको अन्तवार्ता (भिडियो)
अर्थ राजनीति । नेपाल रास्ट्र बैंकका सञ्चालक सिए. डा. सुबोध कुमार कर्णले नेपाल रास्ट्र बैंकमा सञ्चालकको काम, कर्तब्य र दयित्योको बारेमा प्रस्ट पारेका छन । उनले नेपाल रास्ट्र बैंकको कमीकमजोरी र समस्याको बारेमा पनि बताएका छन । साथै आफु चार्टर अक्काउण्टेन भएको नाताले बैंकिंङ् क्षेत्रमा अडिट कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा समेत जानकारी […]